စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျတဲ့သူမဖြစ်အောင် ဒါတွေရှောင် - Askstyle
လောကမှာ လူတိုင်းက လူကောင်းတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ လူကောင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလည် သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြပေးမယ့် အရာလေးတွေကတော့ စိတ်ဓာတ် အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျတဲ့သူတွေရဲ့ အကျင့်လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုထဲမှာ မပါဖို့ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း နိမ့်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်တွေ၊ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ပညာတွေကို အမြဲတမ်း ဂုဏ်မောက်တတ်ကြပါတယ်။ မပြည့်တဲ့အိုး ဘောင်ဘင်ခတ် သလိုပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်တွေဟာ သူတစ်ပါးကို အနိုင်ယူဖို့၊ သူတစ်ပါးကို နှိမ်ဖို့နဲ့ သူတစ်ပါးကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပဲ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာချမ်းသာ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ပညာတတ်တတ် သူတစ်ပါးအတွက် အသုံးမဝင်တဲ့ ဘဝင်ရူးတွေသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။
*စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့်အစား သူတစ်ပါးကို ယှဉ်ပြိုင်တတ်ကြပါတယ်။ သူတစ်ပါးက သူတို့ထက် သာသွားရင် မအိပ်နိုင်၊မစားနိုင်တွေဖြစ်ပြီး ဘယ်လို အနိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုသာ အမြဲတမ်း တွေးတောနေလေ့ရှိပါတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဂုဏ်တွေကို အထူးအလေးထားကြပြီး အမြဲတမ်း ယှဉ်ပြိုင်တတ်ကြသလို မနာလိုစိတ်လည်း အရမ်းကို ကြီးကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ သူတို့ထက်သာတဲ့သူတွေ၊ သူတို့မနာလိုတဲ့သူတွေရဲ့ သတင်းကို မဟုတ်မမှန် အပုပ်ချတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့စကား တော်တော်များများဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ မကောင်းကြောင်း၊ အပုပ်သတင်းတွေနဲ့ လှောင်ပြောင်တဲ့ စကားတွေသာ များပါတယ်။ တစ်နေကုန် အကျိုးမရှိတဲ့ စကားတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေရလည်း အချိန်ကို နှမြောရကောင်းမှန်း မသိတဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျတဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။
အလိုက်မသိတာလည်း စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် သူတစ်ပါးရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ၊ သူတစ်ပါးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ၊ သူတစ်ပါးပြောဖို့ အခက်အခဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အတင်းမေးတာ၊ သူတစ်ပါး မပေးချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အတင်းတောင်းတာ၊ သူတစ်ပါး နားမထောင်ချင်တဲ့ အရာကို အတင်းသွားပြောတာ အဲဒါတွေအားလုံးဟာ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျကြောင်း ပြနေတဲ့ လက္ခဏာတွေပါပဲ။
စိတ်ဓာတ်နိမ့်ကျတဲ့ သူတွေဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ အားနည်းချက်၊ သူတစ်ပါးရဲ့ အရှုံးတွေကို သနားကိုယ်ချင်းစာရမယ့်အစား လှောင်ပြောင်ရယ်မောပြီး ကဲ့ရဲ့ တတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုမြင်ပြီး သူတစ်ပါးကို ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ရာမှာ တအားကို ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ပေါင်းတဲ့သူ မရှိတတ်ကြပါဘူး။
CREDIT – Original writer & Uploader
လောကမှာ လူတိုငျးက လူကောငျးတှေ မဟုတျကွပါဘူး။ လူကောငျးဟုတျမဟုတျဆိုတာကိုလညျ သူတို့ရဲ့ စိတျနစေိတျထား၊ စိတျဓာတျရေးရာကို ကွညျ့ရငျ သိနိုငျပါတယျ။
အခုဖျောပွပေးမယျ့ အရာလေးတှကေတော့ စိတျဓာတျ အဆငျ့အတနျးနိမျ့ကတြဲ့သူတှရေဲ့ အကငျြ့လက်ခဏာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ သငျကိုယျတိုငျလညျး ဒီလိုထဲမှာ မပါဖို့ အရမျးကို အရေးကွီးပါတယျ။
စိတျဓာတျအဆငျ့အတနျး နိမျ့တဲ့သူတှဟော သူတို့ရဲ့ အားသာခကျြတှေ၊ ပိုငျဆိုငျတဲ့ ပစ်စညျးတှေ၊ ပညာတှကေို အမွဲတမျး ဂုဏျမောကျတတျကွပါတယျ။ မပွညျ့တဲ့အိုး ဘောငျဘငျခတျ သလိုပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ အားသာခကျြတှဟော သူတဈပါးကို အနိုငျယူဖို့၊ သူတဈပါးကို နှိမျဖို့နဲ့ သူတဈပါးကို တိုကျခိုကျဖို့အတှကျပဲ အသုံးပွုကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ဟာ ဘယျလောကျပဲ ခမျြးသာခမျြးသာ၊ ဘယျလောကျပဲ ပညာတတျတတျ သူတဈပါးအတှကျ အသုံးမဝငျတဲ့ ဘဝငျရူးတှသော ဖွဈကွပါတယျ။
*စိတျဓာတျအဆငျ့အတနျး နိမျ့ကသြူတှဟော ကိုယျ့ကိုယျကို ယှဉျပွိုငျရမယျ့အစား သူတဈပါးကို ယှဉျပွိုငျတတျကွပါတယျ။ သူတဈပါးက သူတို့ထကျ သာသှားရငျ မအိပျနိုငျ၊မစားနိုငျတှဖွေဈပွီး ဘယျလို အနိုငျယူရမလဲဆိုတာကိုသာ အမွဲတမျး တှေးတောနလေရှေိ့ပါတယျ။ သူတဈပါးရဲ့ ပိုငျဆိုငျမှု၊ ဂုဏျတှကေို အထူးအလေးထားကွပွီး အမွဲတမျး ယှဉျပွိုငျတတျကွသလို မနာလိုစိတျလညျး အရမျးကို ကွီးကွပါတယျ။
သူတို့ဟာ သူတို့ထကျသာတဲ့သူတှေ၊ သူတို့မနာလိုတဲ့သူတှရေဲ့ သတငျးကို မဟုတျမမှနျ အပုပျခတြတျကွပါတယျ။ သူတို့ပွောတဲ့စကား တျောတျောမြားမြားဟာ သူတဈပါးရဲ့ မကောငျးကွောငျး၊ အပုပျသတငျးတှနေဲ့ လှောငျပွောငျတဲ့ စကားတှသော မြားပါတယျ။ တဈနကေုနျ အကြိုးမရှိတဲ့ စကားတှနေဲ့ အခြိနျဖွုနျးနရေလညျး အခြိနျကို နှမွောရကောငျးမှနျး မသိတဲ့သူတှေ ဖွဈတယျ။ ဒီလိုလူတှဟော စိတျဓာတျအဆငျ့အတနျး နိမျ့ကတြဲ့သူတှေ ဖွဈတယျ။
အလိုကျမသိတာလညျး စိတျဓာတျအဆငျ့အတနျး နိမျ့ကခြွငျးတဈမြိုးဖွဈတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုရငျ သူတဈပါးရဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာတှေ၊ သူတဈပါးရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှေ၊ သူတဈပါးပွောဖို့ အခကျအခဲရှိတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို အတငျးမေးတာ၊ သူတဈပါး မပေးခငျြတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို အတငျးတောငျးတာ၊ သူတဈပါး နားမထောငျခငျြတဲ့ အရာကို အတငျးသှားပွောတာ အဲဒါတှအေားလုံးဟာ စိတျဓာတျအဆငျ့အတနျး နိမျ့ကကြွောငျး ပွနတေဲ့ လက်ခဏာတှပေါပဲ။
စိတျဓာတျနိမျ့ကတြဲ့ သူတှဟော သူတဈပါးရဲ့ အားနညျးခကျြ၊ သူတဈပါးရဲ့ အရှုံးတှကေို သနားကိုယျခငျြးစာရမယျ့အစား လှောငျပွောငျရယျမောပွီး ကဲ့ရဲ့ တတျကွတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီလိုလူတှဟော ကိုယျကိုယျတိုငျက ဘာမှမဟုတျပမေယျ့ သူတဈပါးအပွဈကိုမွငျပွီး သူတဈပါးကို ကဲ့ရဲ့ဝဖေနျရာမှာ တအားကို ကြှမျးကငျြကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့သူတို့ကို စိတျရငျးအမှနျနဲ့ ပေါငျးတဲ့သူ မရှိတတျကွပါဘူး။
Facebook ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းတဲ့ ညီမလေးတွေနဲ့မမများဖတ်ဖို့…
Facebook ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းတဲ့ ညီမလေးတွေနဲ့မမများဖတ်ဖို့... Facebook ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းတဲ့ မမများကျော်မသွားကြပါနဲ့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပေးကြပါ။ လှတယ် ဆိုပြီးတော့လည်း ကြွားချင်ပြီး မတင်လေနှင့်… ဝါသနာ…
တန်ဖိုးကြီး လန်ဘော်ဂီနီကား ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့ပေးမဲ့ ကားပိုင်ရှင်သူဌေး၏ စကားကြောင့် အားလုံးအံ့သြခဲ့ရ…
တန်ဖိုးကြီး လန်ဘော်ဂီနီကား ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့ပေးမဲ့ ကားပိုင်ရှင်သူဌေး၏ စကားကြောင့် အားလုံးအံ့သြခဲ့ရ... Source - Rachfeed
ဂဠုန်ဦးစောမိန်းမ ဗိုလ်ချုပ်အတွက်အသက်လျော်ကြေး လာပေးတော့ဒေါ်ခင်ကြည် ပြောလိုက်တဲ့ အံ့သြစရာ စကား မှတ်သားစရာကောင်းပါပေတယ်…
ဂဠုန်ဦးစောမိန်းမ ဗိုလ်ချုပ်အတွက်အသက်လျော်ကြေး လာပေးတော့ဒေါ်ခင်ကြည် ပြောလိုက်တဲ့ အံ့သြစရာ စကား မှတ်သားစရာကောင်းပါပေတယ်... ဂဠုန်ဦးစောသည် ကြိုးမိန့်ကျပြီးနောက် ကျဆုးံခဲ့ရသောအာဇာနည်ကိုးဦးအား အသက်လျော်ကြေးပေး ဂဠုန်ဦးစောသည် ကြိုးမိန့်ကျပြီးနောက် ကျဆုးံခဲ့ရသောအာဇာနည်ကိုးဦးအား အသက်လျော်ကြေးပေးရန်…
ပရဟိတသမားကြီး အကယ်ဒမီ ဝေဠုကျော်ရဲ့ ဘ၀အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးမိပြီ ဆိုရင် ကြောက်စရာကောင်းသော ယောက်ျားများ
လာအိုဟာ မြန်မာကို ဘာကြောင့် ကျော်တက်သွားနိုင်သလဲ
အွန်လိုင်းမှာအမျိုးသားတစ်ဦးတည်းနဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေကြလို့ တရုတ်သားအမိအချင်းချင်းသတ်ပုတ်ကြ…
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ရုပ်အတွက် ရွေးချယ်ခံထားရသူ ကိုကျော်ကျော်မျိုးကို ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက မဆက်သွယ်သေးဟုဆို…
မြန်မာ့ရိုးရာစားစရာ ထန်းလျက်နှင့် ကျန်းမာရေး အာနိသင်များ
အချစ်ဆိုတာအသက်အရွယ်ကိုလိုက်ပီးပြောင်းလဲတတ်တယ်နော်💖 💘 …
ကလေးများမစားသင့်သော အစားအစာ ၅ မျိုး…
ဘုရားထဲ မဖွယ်မရာ ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံသူ အမေရိကန် ၂ ဦး အဖမ်းခံရ…
မဖြစ်မနေလမ်းခွဲဖို့ လိုအပ်ခဲ့ပြီဆိုရင် သင်လုပ်ရမှာတွေက….
ကံပွင့် ကံမြင့်စေဖို့ ” ကော်ဖီ” ဓာတ် ပွင့် ၍ လာဘ်ပွင့် ” ငွေ ” ကံ ထူ ကြ ပါ